ကန်ဒီတို့နှစ်ယောက် အဲ့လိုသွားခဲတယ်။ သူကလည်း ပုံမှန်ဆို အိမ်ကပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းတော့ ထူးထူးခြားခြား အိမ်ကပ်နေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ အပြင်တူတူသွားဖြစ်တာ။ နောက်ပြီး Pizza လိုမျိုးကျတော့ တယောက်တည်း သွားမစားချင်ဘူးလေ။
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ အကြွေစေ့တွေ အများကြီးထွက်လာတယ်။ အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲ အိတ်ကြီးက လေးနေတယ်။ အပျင်းတစ်တဲ့ ကန်ဒီက ပိုက်ဆံကို ဘယ်တော့မှ အတိအကျမပေးဘူး။ အကြွေစေ့နှိုက်ရမှာ ပျင်းလို့လေ။ ခုတော့ တောင်လိုပုံနေပြီ။ စုဗူးနဲ့ စုပြီး ပြန်လဲရမယ် :D
SG Dollar လည်း မဟုတ်ဘူး.. ဘယ်သူ လူလည်ကျပြီး ပေးလိုက်လဲ မသိဘူး :(
မမလည်း ပီဇာတော့ ရမ်းတယ်..
မိုက်တာပဲ တိန် .. မောင်တလုံး စကားယူသုံးတာ :P
ကန်ဒီရယ် ပုလင်းက သေးလို့မလောက်တာနေမှာပါ...ဟီး
ကားတိုက်တာတော့ လန့်တောင်သွားတယ်.....နာက အတည်းငယ်တယ်ဟ.....လန့်စရာတွေမလုပ်နဲ့.....
ပီဇာကြိုက် အဲဒီဖျော်ရည်လမ်းအရမ်းကြိုက် ..
ကန်ဒီနဲ့ ညီမလေးနဲ့ရုပ်လည်းတူဖူးနော် ဟိဟိ .. ၂ ယောက်လုံး တော့ချောတယ် တမျိုးစီမတူဘူး
ဘယ်ပီဇာ စားချင်လဲ Hawallia Pizza , Mushroom Pizza , Nopolina Pizza , Tuna Pizza , Pesto Pizza ကြိုက်တာပြော ၊ ခုငါအဲဒါတွေလုပ်နေတယ် ...
မှတ်ချက် ၊ သငယ်ချင်းအားလုံးရဲ့ဘလော့များကို လည်ပေမယ့် အကျွန်ုပ်၏ လိုင်းမကောင်းပါသဖြင့် အတော်မောအောင်ဆောင့်ရသဖြင့် (ဆိုက်ပွင့်ရန် ) မိုးဇက်တစ်ယောက် ပျောက်နေသီဟု သတင်းထွက်နေသည်မှာ မဟုတ်ပါကြောင်း .........
စားကြပါ သောက်ကြပါ ရပ်ကွက်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပါ))))၀။
ကားတွေအဲလောက်မောင်းမှတော့ သေကြပြီပေါ့ကွယ် အဲဒါကြောင့်မို့ ကားတွေကိုထုတ်မမောင်းတာ ရှိုးဒွန်း ထဲမှာဘဲသိမ်းထားတယ်)))၀။
ပီဇာကိုပူနေရင်တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ အေးနေရင်တော့လုံးဝမတို့ တော့ဘူး။း)
ဒုို့ အိတ်လည်းအရမ်းလေးတာ။ အကြွေစေ့တွေမပေးဘဲဒီတုိုင်းထဲ့ထဲ့ထားလို့ လေ ကန်ဒီ့လိုဘဲ။း)
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကန်ဒီ့ကိုတော့ပစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကွန်နက်ရှင်းမရလို့ သူကတောင်စိတ်ပူနေမှာ။
ပီဇာ ဆိုရင်ကြိုက်ပြီးသားပဲ နောက်ကျနေပြီကုန်ရောပေါ့
ဗိုက်ဆာရင်အကုန်စားတယ်..ပီဇာကလွဲလို့.. ။ ဟီးဟီး.။
ကျွန်တော်က ပီဇာကြိုက်ဘူးအစ်မ.။အထဲကဟာတွေကိုမကြိုက်တာ.။ လုံးဝ မစားတာတော့ဟုတ်ဘူး။ ရွေးစရာမရှိရင်တော့စားပါတယ်.။
ဒါနဲ့ အစ်မ ညီမလေးက အေးပုံရတယ်နော်.။ အစ်မနဲ့ကွာတယ်ထင်တယ်. :P.။
ချစ်သူက မထားသွားလောက်ပါဘူး.။နာ့အစ်မ ဒီလောက်တော်တာကို. :P.။
အကြွေတွေများနေရင် ကိုယ့်အူးလေးတွေကို လက်ဆောင်
နာတော့ ဘိလပ်ကမုန့်ဆို ဘာမှမကြိုက်ဘူး၊အဲ့ ပီဇာ
ဟဟ ကန်ဒီ ပီဇာ ကြိုက်သလားဟ
တရုတ်ငွေ ၁ ယွမ်ပါလားးးး!!!!!!
ဒီမှာတောင်အဲ့လို အကြွေစေ့ အတော်ရှား
နေပြီ။ သိမ်းထား ဘော်ဘော်ရေ လေလံ
Pizza လာစားတာ....း)
ကားတိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလဲကြည့်လိုက်ကော စားထားတာတွေဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းတောင်မသိတော့ဘူး
အကြွေစေ့ထည့်တဲ့အိတ်လေးက ပိုင်ရှင်နဲ့တူလို့ထင်ပ ချစ်စရာလေး...း)
ရင်ကွဲစွာ စီးဆင်းနေတဲ့ မျက်ရည်
နာကြင်စွာ ပြွတ်သ်ိပ်နေတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို
မင်းအချစ်ကို ကိုးကွယ်မိခဲ့တဲ့ ငါ့နှလုံးသား
လူတကာရဲ့ ဟားတိုက်ခြင်းကို ခံနေရဆဲပါ..
ဒါပေမဲ့….မင်းလေးကို မမုန်းရက်ပြန်ဘူး ချစ်သူ..